နွေဆူးလင်္ကာ: September 2009
ဆရာတော်နဲ့ ပြောဖြစ်တဲ့ ပရဟိတ
အကြိုက်နှစ်သက်ဆုံး ဘလော့ဂ် ၅ ခု
ကြယ်ကလေး အကူအညီ တောင်းလို့ ဒီတစ်ခေါက် ရွာပြန်တော့ အုန်းပေါက်ရွာကို ရောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူက အုန်းပေါက်ရွာ ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပရဟိတ ကျောင်းကို အလှူငွေ လှူချင်ပါတယ် ဆိုလို့ ကြားကနေ ကူညီပေးဖို့ သွားဖြစ်တာပါ။ လှူတဲ့သူတွေ သံသယ မရှိအောင် ကြားက အလှူခံမပေးပဲနဲ့ ဘုန်းကြီးနဲ့ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြီး လှူတာ ပိုကောင်းမှာမို့ သွားပေးဖြစ်တာပါ။
ကျနော် တစ်ယောက်တည်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ရွာက ပရဟိတလုပ်ဖူးတဲ့ သူငယ်ချင်း သုံးယောက်လောက်နဲ့ သွားဖြစ်တာပါ။ အုန်းပေါက်ရောက်တော့ ကျောင်းအုပ်ဆရာတော် ဦးသီလာနန္ဒနဲ့ တွေ့ပြီး အကြောင်းစုံ ပြောပြတော့ ဘုန်းဘုန်းက တော်တော် ၀မ်းသာသွားပါတယ်။ မတွေ့ရတာ ကြာပြီဖြစ်တဲ့ အဲဒီရွာက ရွာခံ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့လည်း တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီမှာ ဘုန်းဘုန်းက သူစိမ်းမဟုတ်ပဲ ရွာကသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ညီအစ်ကို ၀မ်းကွဲ တော်နေကြလို့ ကျနော်တို့ကို တော်တော် ခင်သွားပါတယ်။ ပြီးတော့ သူ့ကျောင်းမှာ ရှိတဲ့ အခက်အခဲတွေကို ပြောပြပါတယ်။
ကျနော်က ကျောင်းရဲ့ ကျောင်းသားစာရင်းနဲ့ ကြယ်ကလေး လုပ်ပေးမယ်ပြောတဲ့ ဆိုဒ် အတွက် ဆောင်းပါးလို ပုံစံမျိုးလေး ရေးပေးဖို့ တောင်းဆိုတော့ နောက်ရက်ကို ပြန်လာဖို့ ချိန်းလိုက်ပါတယ်။
နောက်ရက်သွားတော့ ဘုန်းဘုန်းနဲ့ ကျောင်းကိစ္စတွေအတွက် တော်တော် ဆွေးနွေးဖြစ်ပါတယ်။ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်နဲ့ ကဗျာ နှစ်ပုဒ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ သူကိုယ်တိုင် ရေးတာမဟုတ်ပဲ သူ့ကျောင်းက ဦးပဉ္ဖင်း ကျောင်းဆရာတွေနဲ့ လုပ်အားပေး ဆရာမတွေ ရေးတာ ဖြစ်ပေမယ့် အောက်က ကလောင်နာမည်ကို ဘယ်လို တပ်ရမလဲမေးတော့ အားလုံး ကျောင်းနာမည်ကိုပဲ တပ်ခိုင်းပါတယ်။
ကြယ်ကလေး လုပ်မယ့်ကိစ္စအတွက် ကူညီပေးးတာ ဖြစ်ပေမယ့် ကျနော်ကိုယ်တိုင်လည်း ဘုန်းဘုန်းကို တတ်နိုင်သမျှ ကူညီပေးမယ်လို့ ဂတိပေးခဲ့လို့ ဒီပို့စ်ကို ရေးဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ဘုန်းဘုန်းနဲ့ ပြောဖြစ်ပြီး ရေးထားတဲ့စာတွေထဲမှာ မပါတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ပို့စ်လေးတစ်ခုအဖြစ် ရေးလိုက်ပါတယ်။
ကျေးလက်တောရွာတစ်ခုမှာ မိသားစု စားဝတ်နေရေးကိစ္စက အတော်လေးကို အခက်အခဲ ဖြစ်နေကြပါတယ်။ ဆင်းရဲသား လက်လုပ်လက်စား လူတန်းစားကို ပြောတာပါ။ အဲဒါဆို မပြောနဲ့တော့ ရွာတိုင်း အဲလိုတော့ ရှိကြမှာပဲလို့ ပြန်မပြောကြပါနဲ့။ ဟုတ်ပါတယ်။ ရွာတိုင်းရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရွာတိုင်းတော့ ဦးသီလာနန္ဒတွေ မရှိပါဘူး။
ဒီပို့စ်လေးကို ဖတ်ဖြစ်တဲ့လူတွေက အဲလိုရွာသူငယ်ချင်းတွေကို ပြန်ပြောပြရင် ဒါမျိုးကျောင်းလေးတွေ ရှိလာဖို့ စိတ်ကူး ကြရင်ကို ကျနော်တို့အတွက် ကူညီရကြိုး နပ်ပါတယ်။
စားဝတ်နေရေးတောင် အနိုင်နိုင် ရုန်းကန်နေရတဲ့ မိသားစုတွေမှာ သားသမီးတွေအတွက် ပညာရေးဆိုတာ ဒုတိယ ဦးစားပေး အဆင့်မှာပဲ ရှိပါတယ်။ သူတို့ဟာ ပညာရဲ့ တန်ဖိုးကို မသိလို့ မဟုတ်ပါဘူး။ သားသမီးတွေကို ပညာတတ်အောင် သင်ပေးချင်တာ မိဘတိုင်းရဲ့ မေတ္တာတရားပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း ဒီခေတ်ရဲ့ ပညာတန်ဖိုးကို သိလို့ပဲ သားသမီးတွေကို ပညာသင်မပေးနိုင်တဲ့ မိဘတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ ရှုပ်သွားပြီလား။ ရှင်းပါ့မယ်။ အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း ဒီခေတ်မှာ ကျောင်းဝင်ကြေး၊ စာရွက်စာတန်းကြေး၊ ဘာညာသာရကာတွေ အများကြီးရှိနေတော့ ဒီခေတ် ပညာရေးအတွက် တန်ဖိုးဟာ ကြီးသွားတော့တာပါပဲ။ မြို့နေလူတန်းစားကတော့ တွေးလိမ့်မယ်၊ ဒီလောက်များကွာလို့။ မထင်ပါနဲ့။ တောရွာမှာရှိတဲ့ ဆင်းရဲသား လူတန်းစားတွေအတွက်တော့ တစ်နေ့လုပ်မှ တစ်နေ့စားရမယ်။ ရာသီဥတုကြောင့် တစ်နေ့မလုပ်နိုင်ရင် တစ်နေ့ ငတ်ပါတယ်။အဲဒီလို အခြေအနေတွေမှာ သားသမီး ပညာရေးဆိုတာ အလှမ်းရခက်တဲ့ ခရီးကြမ်းတွေပါပဲ။ အဲဒီလို ပညာမသင်နိုင်တဲ့ ကလေးငယ်တွေအတွက် မြန်မာပြည်တ၀န်းမှာ ဘ.က လို့ ခေါ်တဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာပါရမီကျောင်း လေးတွေ ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ အထဲမှာ ဆရာတော် ဦးသီလာနန္ဒရဲ့ ရေလည်ကျောင်းလေး အပါအ၀င်ပါပဲ။
ဆရာတော်က ဒီနှစ်မှ ကျောင်းလေး စတင်နို်င်တာပါ။ ၀ါးရိုးခေါင်တိုင်၊ ထရံကာ သက်ကယ်မိုးကျောင်းကလေးကို ပြရင်း အဲလို ကျောင်းဆောင်ကလေးဖြစ်ဖို့ ရွာသူရွာသားတွေ လုပ်အားပေးနေတဲ့ မှတ်တမ်းတင် ဓါတ်ပုံလေးတွေကို ကြည့်ခိုင်းနေတဲ့ ဘုန်းဘုန်းရဲ့ ပီတိဟာ ကျနော်တို့ သူငယ်ချင်းတစ်စုဆီ ကူးစက်လာပါတယ်။
ကျောင်းကလေး စမယ်ဆိုတော့ မတတ်နိုင်တဲ့ မိသားစုရဲ့ သားသမီးတွေကို စုတဲ့အချိန်မှာကို ရင်နာစရာ စကြုံရတာပါပဲ။ အစိုးရကျောင်းတွေမှာ နေလက်စ ကလေးတွေကို ဘ.က ကျောင်းပြောင်းဖို့အတွက် အစိုးရကျောင်းထွက်လက်မှတ် လိုပါတယ်။ အဲလို ထွက်ရင်လည်း ထွက်ချင်တိုင်း ထွက်လို့ မရပါဘူး။ ကျောင်းထွက်ကြေးဆိုတာမျိုး လိုပြန်ရော။ အဲဒီကလေးတွေမှာ အစကတည်းက မရှိပါဘူးဆို။ ကျောင်းထွက်ကြေးကို ဘယ်လို ပေးရမှန်း မသိပါဘူး။ အဲဒီအတွက် ဆရာတော်က အုန်းပေါက် အလယ်တန်းကျောင်း ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီးရဲ့ အကူအညီကိုယူပြီး တချို့အတွက် ဆရာတော်က ကျခံ၊ တချို့အတွက် ဆရာမကြီးက ကျခံ နဲ့ပဲ ကလေးတွေ ကျောင်းထွက်လက်မှတ် ရခဲ့ပါတယ်။
တချို့ကလေးတွေဆို ကြီးတဲ့အထိ ကျောင်းမနေဖူးပါဘူး။ အဲလို ကလေးတွေကိုလည်း ဆရာတော်က မိဘတွေကို မေတ္တာရပ်ခံပြီးတော့ ကျောင်းမှာ ပညာသင်ကြားစေခဲ့ပါတယ်။ အပေါ်ပုံထဲမှာ ပါတဲ့ အရပ်ရှည်ရှည်နဲ့ ကလေးဆို သူငယ်တန်းပါပဲ။ အရပ်ရှည်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အသက်လည်း ကြီးပါပြီ။ သူ့ခင်ဗျာ ဒီအသက်အရွယ်ရောက်မှ ဆရာတော်ရဲ့ ကျေးဇူးကြောင့် ပညာရေးဆိုတာ ဘာမှန်းသိရတဲ့ ကလေးပါ။
ကျနော်တို့အဖွဲ့လည်း ဆရာတော် လိုအပ်တာ ကူညီဖို့ ကတိပေးခဲ့ကြပါတယ်။ ငွေရေးကြေးရေးတော့လည်း အများကြီး မတတ်နိုင်ကြဘူးလေ။ အဲဒီအတွက် ဖြစ်နိုင်သမျှ အကြံဉာဏ် လှူခဲ့ကြပါတယ်။ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကျောင်းအကြောင်း ပြောပြပြီး အလှူခံပေးဖို့အတွက် ပြောဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဆရာတော့်ဘက်ကလည်း လှူချင်တဲ့လူတွေ အတိအကျ လှူနိုင်အောင် ကျောင်းသားတစ်ယောက်အတွက် တစ်နှစ်စာ ကုန်ကျနိုင်မယ့် ပျမ်းမျှ အသုံးစားရိတ်၊ တစ်နှစ်စာ သို့မဟုတ် တစ်လစာ ကုန်ကျနိုင်မယ့် ဗလာစာအုပ် ခဲတံ အရေအတွက် အဲဒါတွေကို စာရင်းပြုစုထားဖို့ အကြံပေးခဲ့ကြပါတယ်။ ပြီးတော့ ဆရာတော်က ဗလာစာအုပ် လှူတဲ့လူတွေ ရှိကြောင်း၊ ရိုးရိုးဗလာစာအုပ်တွေချည်းပဲ လှူကြလို့ လေးကြောင်းမျဉ်း စာအုပ်တွေ လိုအပ်ကြောင်း မိန့်ပါတယ်။
ပြီးတော့ ဘေးကလှူမယ့် အလှူရှင်တွေကိုချည်း အားမကိုးပဲနဲ့ အမြဲတမ်း ကျောင်းရံပုံငွေ ရှိနေအောင် ကျောင်းကို စိတ်ဝင်စားတဲ့ တတ်နိုင်တဲ့ထဲက ရွာခံလူတွေ၊ မြို့ပေါ်ကလူတွေထဲကနေ တစ်အိမ်ထောင်ကို အများကြီးမဟုတ်ဘူး။ တစ်လကို တစ်ရာပဲ အလှူခံဦး အိမ်ထောင်စု တစ်ထောင်ဆို တစ်သိန်း လစဉ် အလှူငွေ ရနေမယ်ပေါ့။ အများအမြင်ရှင်းအောင် ကော်မတီလေး တစ်ခုလည်း ဖွဲ့ဖို့ လိုမယ့်အကြောင်း။ ရွာက လူကြီးတွေနဲ့ ဖွဲ့နိုင်ရင် ပိုကောင်းမယ့် အကြောင်း။ လစဉ် ၀င်ငွေ ထွက်ငွေ စာရင်းကိုလည်း အတိအကျလုပ်ပြီး အလှူရှင်တွေ ကော်မတီလူကြီးတွေကို တင်ပြနိုင်ရင် ပိုကောင်းမယ့် အကြောင်းတွေ ဆရာတော်ကို ဆရာ ပြန်လုပ်ခဲ့ကြပါတယ် ဟဲဟဲ။
ဆရာတော်ကလည်း ကျောင်းရံပုံငွေ ကိစ္စအတွက် ဒီနှစ်ကထိန်မှာ ဆိုင်ကယ် မဲဖောက်ပြီး ကံစမ်းမဲ ရောင်းဖို့ အစီအစဉ် ရှိကြောင်းကို ပြန်မိန့်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ သူငယ်ချင်းတွေကလည်း အရမ်းကောင်းတဲ့ အကြံဖြစ်ကြောင်း၊ ကူရောင်းပေးမယ့် အကြာင်းတွေ ပြောခဲ့ကြပါတယ်။
ဆရာတော် မိန့်ခဲ့တဲ့အထဲက ကျနော် ပြန်ပြောချင်တာကတော့ ပရဟိတသမားဟာ နိုင်ငံရေးနဲ့ ကင်းရှင်းသင့်တယ် ဆိုတာပါပဲ။ တကယ် မှတ်သားသင့်တဲ့ စကားပါ။ ကျနော်ကတော့ ကိုယ့်အတွေးနဲ့ကိုယ် ရောမသွားဖို့ပဲလို့ မှတ်သားလိုက်ပါတယ်။
ပြောရင်းနဲ့ ဆရာမ တစ်ယောက်ပြန်ပြောတာကို သတိရမိလို့ ပြောပါဦးမယ်။ တစ်ခါကဆို ကျောင်းသားလေးတွေ ထမင်းစားကျောင်းဆင်းလို့ စားဖို့ ထမင်းထုပ်လေးဖွင့်လိုက်တော့ ထမင်းတွေက သိုးနေပါသတဲ့။ အဲဒါ ဘယ်နှစ်ရက်အဲလိုပဲ စားနေလဲ မသိဘူး။ အဲဒီနေ့ကမှ ဆရာမက ယူကြည့်မိတော့ ထမင်းသိုးတွေ မစားရဘူးလို့ ပြောပြီး ကျောင်းမှာရှိတဲ့ ထမင်း ကျွေးလိုက်ရပါသတဲ့။ ဖြစ်နိုင်တာကတော့ သူ့မိဘတွေက မနက်အစောကြီး အလုပ်သွားရမှာမို့ အဲဒီထမင်းတွေကို ညကတည်းက ဒါမှမဟုတ် မနက်အစောကြီးထပြီး ချက်ထားတာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အညာနေဆိုတာလည်း သိတဲ့အတိုင်း ခဏနဲ့ ထမင်းတွေ ဟင်းတွေ သိုးကုန်လောက်အောင် ပူတာလေ။ အဲလိုကို ကလေးတွေရဲ့ မိသားစုအခြေအနေက တော်တော်လေးကို ဆိုးနေတာပါ။ ဆရာတော်သာ အလင်းမပေးနိုင်ရင် အဲဒီကလေးတွေရဲ့ အနာဂတ်ဟာ အမှောင်ထဲကကို ထွက်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ရေးကောင်းကောင်းနဲ့ ရေးလိုက်တာ တော်တော်တောင် ရှည်သွားပြီ။ ဒါတောင် သတိရသမျှပဲ ရေးထားသေးတာ။ နောက်သတိရတာတွေရှိရင် သတိရသလို ရေးပါဦးမယ်။
ပညာပါရမီ အုန်းပေါက်ရွာ ရေလည်ဘုန်းတော်ကြီးသင် မူလတန်းကျောင်းကို လှူချင်တဲ့လူများရှိရင် အုန်းပေါက်ရွာက ကံစောထွန်း ၀၉ ၂၀၃၄၆၈၉ ကနေတစ်ဆင့် ဆရာတော့်ကို တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြီး လှူဒါန်းနိုင်ပါတယ်။ ကျနော်ကနေ တဆင့် လှူချင်တယ်ဆိုလည်း စိတ်ရောကိုယ်ပါ ကူညီဖို့အသင့်ပါ။ ဒါမှမဟုတ် ကြယ်ကလေးနဲ့လည်း ဆက်သွယ်ပြီး လှူလို့ ရပါလိမ့်မယ်။
ပြည်ပက လှူချင်သူများအတွက်တော့ နောက် ရက်အနည်းငယ်မှ ဆရာတော်ရဲ့ ဂျီမေးလ်နဲ့ ဆရာတော့်ရဲ့ ဘဏ်အကောင့်ကို ပြောပါ့မယ်။ ကျနော်နဲ့လည်း ဆရာတော်က အွန်လိုင်းမှာ မတွေ့ဖြစ်သေးပါဘူး။ ဆရာတော်က ရွာမှာဆိုတော့ မန္တလေး ရောက်မှ အွန်လိုင်း တက်ဖြစ်လို့ပါ။
ဒီပို့စ်လေးနဲ့ ကျနော် ကုသိုလ် ယူလိုက်ပါတယ်။ ဒီဘ၀မှာ ကျနော်ဟာ ပညာပါရမီ နည်းခဲ့တဲ့အတွက် ငွေရေးကြေးရေး မတတ်နိုင်ပေမယ့် တတ်စွမ်းသမျှလေးနဲ့ ပညာပါရမီ ဖြည့်လိုက်ပါတယ်။ အားလုံးကိုလည်း မွန်မြတ်တဲ့ ပရဟိတ စိတ်ထား ကုသိုလ်ပွားများကြဖို့ နိဗ္ဗာန်အကျိုးမျှော် နိုးဆော်လိုက်ရပါတယ် ခင်ဗျား။ ။
ရေးသူ နွေဆူးလင်္ကာ အချိန် 7:32 PM
Labels: ပညာပါရမီ ရေလည်ပရဟိတကျောင်း၊ အုန်းပေါက်ရွာ comments (17)
ကက်ဆက်ထဲက ရေတွေ ပန်းထွက်လာတာကြောင့် ကျွန်တော် အလန့်တကြား အော်လိုက်မိတယ် ... ...
“ !!! ... ... !!! ”
“ဟေ့ကောင် ... မအော်ပါနဲ့ကွာ ... ရေတွေမဟုတ်ပါဘူး ... မျက်ရည်တွေပါ ... မင်းက အလွမ်းသီချင်းတွေချည်း ဖွင့်နေတော့ ငါလည်း ငိုချင်လာလို့ပါ ...”
“မင်းငိုလည်း မတတ်နိုင်ဘူး ... ငါ့ကောင်မလေးကြောင့် ငါကတော့ အလွမ်းသီချင်းတွေချည်း ဆက်ဖွင့်ရမှာပဲ ...”
ပြောရင်းဆိုရင်းပင် အလွမ်းခလုတ်ကို ကျွန်တော် နှိပ်ချလိုက်သည် ...
“ အား !! ”
ကက်ဆက်ကြီး အလယ်က အက်၍ ကွဲထွက်သွားသည်။
အသည်းကွဲ၍ ရင်ကွဲနာကျ သေသွားခြင်း ဖြစ်သည်။ ။
ပုံလေးကို ဒီနေရာက ယူပါတယ်။
ရေးသူ နွေဆူးလင်္ကာ အချိန် 6:52 PM
Labels: ဝတ္တုတို comments (18)
ငါ့ကို လာမမျှားနဲ့ ... ...။
ပွင့်တတ်တဲ့ ပန်းမျိုးပါ ...။
အဖိတ်အစင် ရှိတာပေါ့ ... ...
ငါ့ ဆူးက ငါ့ကို ပြန်မစူးဘူး ...။
အနှိုးရခက်တာက လွဲရင် ...
ငါ လူကောင်းပါကွယ် ... ...။
မိုးလင်းသွားရင်တော့ ... ... ...။
... ... ပြန်ဆုံကြသေးတာပေါ့ ...
မင်းအိပ်မက်တွေကို ... ခဏ ...
... ... ပြန်သိမ်းထားလိုက် ။ ။
Labels: ကဗျာ comments (17)
ပါဝင်သူများ ... ... ...
- ဈေးသည်ကြီး ဦးဆန်ရွှေ
- ဈေးဝယ်သူ တရုတ် ကုလား လူမျိုးခြားများ
- စုတ်စုတ် ပြတ်ပြတ် ၀တ်ဆင်ထားသော ဆင်းရဲသား လုပ်သားပြည်သူများ
- (ဈေးဆိုင်အိမ်ပုံ ပန်းချီကားကို နောက်ခံထား၍ ဈေးသည်ကြီး ဆန်ရွှေမှ အော်ဟစ် ဈေးရောင်းနေစေ)
- (ဆင်းရဲသား လုပ်သားပြည်သူများက ပေါက်ပြား ဂေါ်ပြား အစရှိသော ကိရိယာ တန်ဆာပလာများ ကိုင်ဆောင်၍ ဖြတ်သွားဖြတ်လာ ပြုလုပ်နေစေ)
ရွှေ ။ ။ “လာနော် လာနော် ... ဟောဒီမှာ သဘာဝဓါတ်ငွေ့တွေ... ကျောက်စိမ်းတွေ... သစ်တောထွက် ပစ္စည်းတွေ ဈေးပေါပေါနဲ့ ရောင်းပေးနေပြီ... နောက်ရက်ကစပြီး ကျုပ်မရောင်းတော့ဘူး... အဲဒါကြောင့် လျှော့ပေးနေတာ ... ၀ယ်ထားကြပါ ၀ယ်ထားကြပါ ”
- (တရုတ် ကုလား လူမျိုးခြားများက တိုးဝှေ့ ဈေးဝယ်ဟန် ပြုစေ)
ရွှေ ။ ။ “သိပ်မတိုးကြပါနဲ့ ... အားလုံးကို ရောင်းပေးမှာပါ... ရှိသမျှ ဘာမှ မကျန်အောင် ရောင်းပေးမှာပါ... စိတ်ချပါ... သိပ်မတိုးကြပါနဲ့”
- (ထိုအချိန်တွင် အင်တာဗျူးဆရာက ဈေးဝယ်များကြားမှ တိုးဝှေ့ကာ ဈေးသည်ကြီး ဆန်ရွှေကို အင်တာဗျူးစေ)
ဗျူး ။ ။ “ဈေးသည်ကြီး ဦးဆန်ရွှေခင်ဗျား ... နောက်ရက်ကစပြီး မရောင်းတော့ဘူးဆိုတော့ ဆိုင်ပိတ်တော့ မလို့လား?”
ရွှေ ။ ။ “ဘယ့်နှယ့် ပိတ်ရမှာလဲဗျ ... သဘာဝဓါတ်ငွေ့တွေ ... ကျောက်စိမ်းတွေ ထွက်နေသရွေ့ ရောင်းနေဦးမှာပါ ... ကျုပ်မရောင်းတော့ဘူး ဆိုတာက ကျုပ်က အသက်ကြီးပြီလေ ... ကိုယ်တိုင် မရောင်းတော့ပဲ ဟန်ပြ ဈေးရောင်းတစ်ယောက်လောက်ခန့်ပြီး ကျုပ်က နောက်ကနေ ကြိုးကိုင်မလို့ စဉ်းစားထားတယ်ဗျ”
ဗျူး ။ ။ “ဟုတ်ကဲ့ပါ ... ဈေူးသည်ကြီး ဦးဆန်ရွှေ အနေနဲ့ အခုလို ကြိုးစားပမ်းစား ရောင်းဝယ်နေတာ ဘယ်သူ့အတွက်လည်း သိချင်ပါတယ် ခင်ဗျ”
ရွှေ ။ ။ “မေးမှ မေးရက်ပလေဗျာ ... ဘယ်သူ့အတွက် ရှိရဦးမလဲ ... ပြည်သူတွေ အတွက်ပေါ့ဗျ”
ဗျူး ။ ။ “ အော် ... ကျေးဇူးကြီးပါပေတယ်ဗျာ ... ဒါနဲ့ နောက်ဆုံးမေးခွန်း မေးပါဦးမယ် ... မြန်မာပြည်မှာ ပြည်သူလူဦးရေ ဘယ်လောက်ရှိသလဲ သိပါသလား ခင်ဗျာ”
ရွှေ ။ ။ “လုပ်ပြန်ပြီ ... ဒါမေးစရာလား ... ဒီလောက်တော့ သိတာပေါ့ဗျာ ... နေဦး ... အင်း (စဉ်းစားဟန်ဖြင့်) ... ကျုပ်မိန်းမရယ် ... ကျုပ်သမီးတွေရယ် ... သမက်တွေ မြေးတွေရယ် ... ဆွေမျိုးတွေရယ် ... စုစုပေါင်း ငါးဆယ် တစ်ရာလောက်တော့ ရှိတာပေါ့ဗျာ ...”
- (အင်တာဗျူးဆရာ ပက်လက်လန်သွားစေ)
- (ဖြတ်သွားဖြတ်လာ ဆင်းရဲသား ပြည်သူလူထု လမ်းလျှောက်နေရာမှ ရပ်တန့်၍ ‘မှတ်သားလောက်ပါတယ်ရှင့် မှတ်သားလောက်ပါတယ်ခင်ဗျ’ ဟု သံပြိုင်အော်ဆိုရင်း ကန့်လန့်ကာ ချစေ)။ ။
ရေးသူ နွေဆူးလင်္ကာ အချိန် 6:16 PM
Labels: ဝတ္တုတို comments (10)
ခေါင်းစဉ်က မိမိ အကြိုက်နှစ်သက်ဆုံး သွားလည်နေကျ ဘလော့ဂ် ၅ ခုနှင့် ဘာကြောင့် ထိုဘလော့ဂ်များအား ကြိုက်နှစ်သက်ရသလဲ တဲ့။ ၀က်ဝံလေး ရှို့တာ အဲ တဂ် တာလေ။ ပြောရရင်တော့ အစပြု ရှို့သူ သက်တန့်ချို နှင့် ထပ်၍ ပင့်ပေးသူ ၀က်ဝံလေး လို့ သိရပါတယ်။ ရပါတယ် .. ကျွန်တော်ကလည်း မီးဘေးရှောင် မလောင်ခင်တား သီချင်းလေး ညည်ရင်း ရေးပေးလိုက်ပါတယ်။
ဘလော့ဂ်တော်တော်များများကို ကျွန်တော် ရောက်ဖူးသလို ရောက်သမျှ ဘလော့ဂ်တိုင်းကိုလည်း ကြိုက်ပါတယ်။ မကြိုက်ဘူး၊ မကောင်းဘူးဆိုတဲ့ ဘလော့ဂ် မရှိပါဘူး။ ရှိလည်း မပြောပါဘူး ( ဟဲ ဟဲ နောက်တာ ... တကယ် really ဂယ် ရှိဘူး )။ အကြောင်းကတော့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်က ဘာမှ မဟုတ်လို့ ဘယ် ဘလော့ဂ်ဂါကိုမှ အထင် မသေးရဲပါဘူး။ ထားပါလေ ... မဖြစ်မနေ ရေးရတော့မယ် ဆိုမှတော့ အဲဒီထဲကမှ အကြိုက်ဆုံးလို့ ထင်ရတဲ့ ဘလော့ဂ် ၅ခု ကို ပြောရမယ် ဆိုရင် ... ...
(၁) http://taryarminwaimemorial.blogspot.com ပါ။ အသစ် သိပ်ပြီး မတင်ပေမယ့် ဘယ်နှစ်ကြိမ် ဘယ်နှစ်ခါ ပြန်ဖတ်ဖတ် ရိုးမသွားတဲ့ စာတွေ ရှိနေတဲ့ ဘလော့ဂ်ပေါ့။
(၂) http://aungway.blogspot.com ပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရဲရဲတောက် ကဗျာဆရာကြီး အောင်ဝေးပါ။ သူရဲ့ ကဗျာ ဝေဖန်ရေးစာအုပ်တွေကိုလည်း ကျွန်တော် ၀ယ်သိမ်းပါတယ်။ လေဆန်မှာ မြှားတန်းလန်းနဲ့ ပျံသန်းရဲတဲ့ ငှက်သာ မနက်ဖြန်အတွက် ဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့၊ ကဗျာဆရာဆိုတာ စင်ပြိုင် အစိုးရတစ်ရပ်ဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့ ကဗျာဆရာကြီး အောင်ဝေး ပါ။
(၃) http://manorhary.blogspot.com ပါ။ တော်တော်များများ ကြိုက်ကြမယ့် ဘလော့ဂ်ပါ။ အစ်မ မနော်ဟရီ ရဲ့ ဘလော့ဂ်ကိုတော့ ဘာကြောင့် ကြိုက်ရလဲဆိုတာကို ထွေထွေထူးထူး ညွှန်းစရာ လိုမယ် မထင်ပါဘူး။
(၄) http://chaweimahn.myanmarbloggers.info ပါ။ ချောအိမာန်(မန္တလေး) ဆိုတာ လက်ရှိ Mandalay Icon မဂ္ဂဇင်းရဲ့ အယ်ဒီတာပါ။ အရေးအသား ကောင်းတဲ့ စာရေးသူတစ်ယောက်ဖြစ်တာရော၊ မန္တလေးဆိုတဲ့ သံယောဇဉ်နဲ့ပါ အမြဲ ရောက်ဖြစ်တဲ့ ဘလော့ဂ်ပါ။
(၅) http://ahuntphonemyat.wordpress.com ကလည်း တကယ် သွားကြည့်သင့်တဲ့ ဘလော့ဂ် တစ်ခုပါ။ သူလုပ်နေတဲ့ DVB က အင်တာနက် စာမျက်နှာ အစီအစဉ်မှာများ ကျနော့် ဘလော့ဂ်လေးကို ညွှန်းမလား ဆိုပြီး သွားသွား မျက်နှာ ပြရတာလေ (ဟီးဟီး ပေါရဲလိုက်တာနော် ... ဒီလောက် ချာတူးလန်နေတဲ့ ဘလော့ဂ်ကိုများ DVB က ညွှန်းရဦးမတဲ့)။
ကဲ ရေးပြီးပါပြီ။ ဘာကြောင့် ကြိုက်ရလဲ ဆိုတော့ သူတို့တွေက အင်တာနက်ဆိုတာ ဘာမှန်းမသိခင်ကတည်းက ကျွန်တော် ဖတ်ဖူး ကြိုက်ဖူးတဲ့ စာရေးဆရာတွေ မို့လို့ပါပဲ။
၀က်ဝံလေးရေ ... ကိုနွေဆူးကြီးက အကြည်တော်ရေးတဲ့ လူလည်ကြီးများ ရွာကလားလို့ လာမအော်နဲ့နော်။ ဆရာသော်တာဆွေ ဘာသာပြန်တဲ့ ဘော့ပရစ်တီးလောက်လည်း လူလည် မကျတတ်ပါဘူး။ (အဲဒီစာအုပ် ဖတ်ဖူးလား၊ ရှာဖတ်ကြည့်ကြပါ၊ အရမ်းကောင်းပြီး ရယ်ရတယ်။ ဤကား- ကြေငြာချပ်။ ။) ဆင်ဝှေ့ရန်ရှောင်တဲ့။ အဓိပ္ပါယ် ဘာမှန်း မသိပေမယ့် ကျွန်တော်ကတော့ ပြဿနာဆင်ကြီး အဝှေ့မခံရအောင် ဝေါင်ဝေါင်ရှေး ဝေးဝေးက ရှောင်ပါ၏။
တကယ့် သက်ရှိ ဆင်ကိုသာ အဝှေ့ခံလိုက် ချင်ပါတယ်။ မတော်တဆ တစ်ခုခု အရေးမှားသွားရင် မရှိမဲ့ ရှိမဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အမြင်မကြည် ဖြစ်သွားမှ ဘယ်သူမှ မလာတဲ့ ဘလော့ဂ်ဘ၀နဲ့ ငုတ်တုပ်ကြီး ရှင်နေရမှာ ကြောက်ပါတယ်။ ။
ရေးသူ နွေဆူးလင်္ကာ အချိန် 7:09 PM
Labels: Tag comments (6)